ဘယ်လိုထိပ်တန်း်ထမ်းခေါ်ယူမှု Headhunters, HR မန်နေဂျာများနှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါရန်🥇
Published by ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ at အောက်တိုဘာလ 14, 2017
သင့်ရဲ့ LinkedIn တို့မှန်ထမ်းခေါ်ယူမှုထည့်သွင်းနည်း
ဘယ်လိုထိပ်တန်း်ထမ်းခေါ်ယူမှုနှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါရန် ?. အဖြစ်မှန်မှာတော့အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ LinkedIn တို့သွားပြီး ချိတ်ဆက်ရန်ဖိတ်ကြားချက်ကိုပေးပို့။ သင်တို့မူကားအနည်းငယ်ရှေ့ဆက်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းပြုပါရန်။ သငျသညျရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအရာသင်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ခံရဖို့လိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်အဆက်အသွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပြုလျှင်သင်၏ဖိတ်စာပေးပို့သူကလက်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်းသည့်အခါစောင့်ပါ။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်ပါကအလုပ်လုပ်ကိုင်ရက်ပေါင်း5န်းကျင်ကိုယူပါလိမ့်မယ်။ သို့မဟုတ်အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆောင်းပါးကိုဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ထွက်ရှာတွေ့ သငျသညျကာတာနိုင်ငံအတွက်အသစ်တခုအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနိုင်သည်ကိုဘယ်လို ဆိုရှယ်မီဒီယာသည်။
သငျသညျပင်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်မီကောင်းသောနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခု ဒူဘိုင်း။ သင်မည်သို့တတ်နိုင်သည်ကိုကြည့်ရှုရန်ဖြစ်သည် သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက်အလည်အပတ်ဗီဇာပေါ်မှာနေစဉ်အလုပ်ရှာတွေ့။ သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အရရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုခက်ခဲနေပါစေရှိပါသည်။ သငျသညျရှာဖွေစုဆောင်းရောက်ရှိရန်ခက်ခဲအလုံအလောက်လုပ်ကိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းရန်လိုအပ်ပါတယ် အမှုဆောင်အရာရှိနှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့လမ်းကိုသိ.
ထိပ်တန်း်ထမ်းခေါ်ယူမှုနှင့် Headhunters နှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
ထိပ်တန်းရှာဖွေစုဆောင်းနှင့်အတူချိတ်ဆက်ခြင်းများအတွက်ကိုလမ်းပြ။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ထိပ်တန်း အလုပ်အမှုဆောင်န်ထမ်းခေါ်ယူမှု, အလုပ်ခန့်ကိုယ်စားလှယ်နှင့် HR မန်နေဂျာများ LinkedIn အပေါ်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကညီတူညီမျှဟုချေါသ headhunters ။ သူတို့ဖြစ်ကြသည် စုဆောင်းရေး ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများသုတေသနပြုသူကိုပညာရှင်များ။ ဟုတ်ပါတယ် $ (USD) ၏အလင်း၌တည်၏။ အထူးသဖြင့်သူတို့ကိုယ်ပိုင်ဖောက်သည်များအတွက်။ အားလုံးကျော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရှာဖွေခြင်း ယူအေအီး။ အကျဉ်းချုပ်မှာ, ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲ အလုပ်အမှုဆောင်ရာထူးဖြည့်အပေါ်အလေးပေး။ ကျနော်တို့ယူအေအီးအတွက်ကုမ္ပဏီများနှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကိုသင်ကူညီပေးရန်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေ ဒူဘိုင်းအတွက်မြှင့်တင်ရန်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျနော်တို့ LinkedIn ဆက်သွယ်မှုပေါ် မူတည်. နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နေကြတယ် HR အတွေ့အကြုံကို။
အလုပ်ရှင်များကိုရှာတွေ့၏နောက်ထပ်စမတ်လမ်း။ သင်သည်လည်းကုမ္ပဏီများကငှားရမ်းရန်ကိုကြည့်သင့်ပါတယ်အတော်လေးရိုးရှင်းပါသည်။ ဒူဘိုင်းအတွက် Careerjet အလုပ်ရှင် နှင့် ပင်လယ်ကွေ့တွင်နဂါးပင်လယ်ကွေ့ငှားရမ်းကုမ္ပဏီ။ သူတို့ကသင်၏ CV နှင့်အတူလျှောက်ထားရန်ကယ့်ကိုထိုက်တန်ဖြစ်ကြသည်။
HR Manager များနှင့််ထမ်းခေါ်ယူမှု
ယေဘုယျအားဖြင့်၏စကားပြော ရှာဖွေစုဆောင်း နှင့် HR မန်နေဂျာများ။ သူတို့ဟာ၏အဓိကအမာခံများမှာ အရှေ့အလယ်ပိုင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေတာ. Iဎအကျဉ်းချုပ်, သူတို့ ကနေ 98% နှင့်အတူပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရာထူးဖြည့်နိုင်ပါတယ် linkedin. အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးအချိန်ကိုသာဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့အားမရအပေါ်အာရုံစူးစိုက်စေခြင်းငှါနောက်ထပ် key ကိုအမှတ်။ အဆင့်မြင့်စီမံခန့်ခွဲမှုရာထူးဖြစ်ကြသည်။ ကြှနျုပျတို့မှာ ဤနေရာတွင်သင်ကချိတ်ဆက်နှင့်ဒူဘိုင်း၌သင်တို့ကိုလမ်းပြ။ အလုပ်အမှုဆောင် headhunters နှင့်အကြီးတန်းနှင့်အတူ HR မန်နေဂျာများ။ ကျွန်တော်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသောစုဆောင်းမှုအဖွဲ့။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အကျနော်တို့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအများဆုံးအားမရနေကြသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကျနော်တို့များမှာ နိုင်ငံတကာကစားသမားဘရှာဖွေနေသူအတူလုပ်ကိုင်.
LinkedIn အသုံးပြုခြင်း ဂျော့ရှာရန် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသုတေသနများအတွက်. အများဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှတ်မိဖို့ပထမဦးဆုံးအရာ။ ပင် ပါကစ္စတန်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အတွက်ထားရှိရနိုင်။ ဒါကြောင့်သင်တို့သည်ငါတို့၏အလုပ်အမှုဆောင်စုဆောင်းရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုကထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ရှာဖွေဘို့အကောင်းတစ်အရင်းအမြစ်အဖြစ် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အများအတွက်.
အတူဆက်သွယ်မှုလုပ်ရန်အရေးကြီးပါသည်ဒါဟာဖြစ်ပါသည် HR အေဂျင်စီရှာဖွေစုဆောင်း (headhunters) နှင့်ကော်ပိုရိတ် HR ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမသာအထူးပြုအတွက် အင်ဒီးယန်းများအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာဖွေနေန်ဆောင်မှုများ။ သို့သော်လည်းအတွင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနေရာချထားအကူအညီနဲ့အတွက် ဒူဘိုင်းမြို့။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဖြည့်စွက် အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်အထိအခန်းကဏ္ဍ ကြောင်းခက်ခဲနေကြသည်မဟုတ်။ လူအများစုအုပ်ချုပ်ရေး်ထမ်းရှာဖွေသူကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပွုသောအခါ အလုပ်ရှာဖွေသူများ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုံးပြီး ကုမ္ပဏီဝန်ဆောင်မှု.
ထောက်ပြရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားလူများနှင့်ဆက်သွယ်နေသည် WhatsApp ကို။ ဘယ်သူအလုပ်လုပ်မှာ ယူအေအီးရှိအလုပ်အမှုဆောင်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီများ စော်ဘွား။ အာရုံနှင့်အတူ လျှောက်ထားသူအားမရကုမ္ပဏီများ သူတို့ရဲ့ client ကိုကုမ္ပဏီများနှင့်အတူ ယူအေအီး။ အပြုသဘောဘက်တွင်ကျနော်တို့မကြာခဏ HR ဌာနအတွင်းအထူးပြုခွက်တဆယ်အမှုဆောင်အရာရှိပညာရှင်များ employ သူကိုကြီးမားသောကုမ္ပဏီများနှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည်။
linkedin ဂျော့ရှာရန် No.1 လူမှုကွန်ယက်
၏ရည်ရွယ်ချက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း 2018-219 အတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။ LinkedIn ကိုယခုအခါ Microsoft မှပိုင်ဆိုင်သည်။ နည်းလမ်းအားလုံးအားဖြင့်, Linkedin ဂျော့ဘ်ရှာဖွေရေး 500 အတွက်သန်း 2017 ကျော်အသုံးပြုသူများကပြောဆိုထားသည်။ ဆက်ဆက်, ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီစီးပွားရေးလုပ်ငန်း-အာရုံစူးစိုက် ၏မြင့်တက်စံဖို့ လူမှုကွန်ယက်။ သို့ ပြသ အလုပ်ရှာဖွေနေ န်ဆောင်မှု။ အဆိုပါ 467 သန်းနှင့်အတူ ကမ္ဘာတဝှမ်းအမှုဆောင်အရာရှိ။ 500 သန်းကျော်စာရင်းပြုနိုင်ရန် linkedin အသုံးပြုသူများသည်။ 200 နိုင်ငံများထက် ပို. မှလာကြ၏။ ဒီအကြောင်းပြချက်အဘို့, LinkedIn တို့ကုမ္ပဏီထက်ပို 25 သန်း lists Google တွင်တက်ကြွစွာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပို့စ်များကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်း။ ဒေတာအလေးပေးဖို့သူတို့ကပိုထက် 19 သန်းကုမ္ပဏီများသည်စီမံခန့်ခွဲ။
အလုပ်ရှင်များအဘို့အ linkedin အကောင်းဆုံး Portal ကို
နားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်, LinkedIn တို့ လက်ရှိတွင်အကောင်းဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် အလုပ်တွင်ကျယ်စွာ အတူချိတ်ဆက်ဖို့ HR အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာမန်နေဂျာနှင့်ဝန်ထမ်းခေါ်ယူမှု။ တစ်ဦးအဖြစ် န်ဆောင်မှုများ၏ပုံဥပမာ ကြောင်းရှာဖွေနေအလုပ်အကိုင်များဘို့သင့်ထံသို့လာကြ၏။ သို့သျောလညျး, သငျသခြောဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သငျသညျတန်ဖိုးရှိသူတစ်ဦးနှင့်အတူချိတ်ဆက်သော။ နှင့်သင့်အချိန်ဖြုန်းမပေးပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, သင့်ပရိုဖိုင်းကိုလူသိများဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်စွမ်းရည်များအတွက် ရှာဖွေစုဆောင်း WhatsApp ကိုပေါ်တွင်သင်ဆက်သွယ်ပါစေ။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူသင်တို့နှင့်အတူအမချိတ်ဆက်မယ်ဆိုရင် အရှေ့အလယ်ပိုင်း်ထမ်းခေါ်ယူမှုနှင့် Headhunters သငျသညျကိုသတိမပြုမိသွားပါလိမ့်မယ်။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအကြီးဆုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ LinkedIn ညများအတွက်အသုံးပြုမှုနှင့်အကောင်းဆုံးobs ရှာပါ။ ကျနော်တို့တောင်မှပေးနေကြတယ် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံအတွင်းစုဆောင်းမှုန်ဆောင်မှုများ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအထူးသဖြင့်အတူလုပ်ကိုင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှာဖွေစုဆောင်း။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူကျနော်တို့ကိုဘယ်လိုရန်ကိုသိရ ထိပ်တန်း်ထမ်းခေါ်ယူမှုနှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါ နေ့စဉ်သူကိုလင့်ခ်လုပ်ထားသောသုံးနိုင်သည်။ ကျနော်တို့ 2016 အတွက်ဖြန့်ချိခဲ့ကြပြီးကတည်းကကျွန်တော်ဆက်ဆက်ကတစ်ပန်ကာဖြစ်လာသည်။ ကျွန်တော်တို့သည်ထိုကွောငျ့သငျတို့ LinkedIn အပေါ်အံ့သြဖွယ်ဝန်ဆောင်မှုပူဇော်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေကတော့ကျနော်တို့ရဲ့သုံးပြီး သူတို့ရဲ့ profile များကိုခုနှစ်တွင်လင့်ခ်လုပ်ထားသောတည်ဆဲဖန်တီးတိုးတက်စေရန်ဝန်ဆောင်မှု.
ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားရန်, ငါတို့ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်တော်မူအသုံးပြုနေသည် linkedin ဆက်သွယ်မှု။ သို့ သင်တစ်ဦးအလုပ်ရကူညီပေးရန်။ သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်ပေါ်တွင်နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၌တည်၏။ တကယ်တော့ကြောင်းတတ်နိုင်သမျှနည်းလမ်းပဲ2ဖြစ်ကြသည် တစ်ဦးခြားနားအောင်။ ကျွန်တော်တို့ကိုသည်ဤစနစ်များရန်သင့်အားမိတ်ဆက်ပေးကွပါစို့။ ထိုအပင်ကိုပိုပြီး ဘဏ်လုပ်ငန်းရှာဖွေစုဆောင်းသင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုကြလိမ့်မည်။ အတွက်သင်၏ပရိုဖိုင် 2017 -2018။ သငျသညျဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုတဲ့အခါသင်ကသက်ရောက်မှုမှာအံ့အားသင့်လိမ့်မည်နှင့်မည်သို့ဒီကသင့်အတွက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် အနာဂတ် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေရေး, ဒီလက်ငင်းမှာအဖြစ်တစ်ဦးအနေဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ရှုထောကွန်ရက်အမှတ်.
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီကူညီပေးသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှာဖွေသူများ အလုပ်အကိုင်အတွင်ကျယ်စွာအပေါ်တစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေတာ. ဤတွင်ထိုအတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်ဈေးကွက်။ အခြားအ်ထမ်းရှာဖွေသူအမှုဆောင်အရာရှိနှင့်ကုမ္ပဏီများနှင့်အတူ။ ယူအေအီးမှလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှပြည်တော်ပြန်စုဆောင်း။ ဤအချက်များ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီပေးထားသော။ ကို Cအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေကြ onnects နှင့် ကျွမ်းကျင်သူများ။ မှ ရေခြားမြေခြား အလုပ်ဈေးကွက်။ နှင့် ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ။ ထိုသူတို့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်း အရှေ့အလယ်ပိုင်း။ ချိန်ခွင်လျှာအားဖြင့်ငါတို့သည်ဘွဲ့ရကျောင်းသားများကိုကူညီပံ့ပိုးခြင်းနှင့် နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရှင်များ။ အမျိုးမျိုးသောအတွက် အတွက်အလုပ်ရှာဖွေစိန်ခေါ်မှုများ ဒူဘိုင်း.
ကျိန်းသေကျနော်တို့တံခါးဖွင့်ထားပါသည် အသစ် ဒူဘိုင်းအတွက်သင်ကြားရေးအလုပ်အကိုင်များများအတွက်အလုပ်အကိုင်အအလားအလာ ထဲမှာ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု. ထိုသူတို့၏ LinkedIn အတွေ့အကြုံကို လိုက်. အတွေ့အကြုံများပေးအပ်။ သင်တစ်ဦးကိုရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း. ပြည်တွင်းပြည်ပအလုပ်လုပ်ရှာဖွေနေ။ ထိုခဏခြင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏မှ c ကိုကြည့်ယူရှာဖွေစုဆောင်းကဏ္ဍများနှင့်အတူ onnect ။ နှင့်ကျိန်းသေ, သူတို့နှင့်အတူချိတ်ဆက် သူတို့ဒူဘိုင်းကုန်တိုက်အလုပ်အကိုင်များရှိစေခြင်းငှါ.
အကြီးမားဆုံး LinkedIn ဂျော့ရှာရန် သင်တစ်ဦးရရှိရန်ကူညီပေးနိုင်သည့်အဖွဲ့များ ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အ
ဒူဘိုင်းဂျော့ & Careers | ယူအေအီး | အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ
အဆိုပါအကြီးမားဆုံး LinkedIn Group မှ join
ဤသည် LinkedIn Group မှအကြောင်း
ဤအုပ်စုအားလုံးမှဖွင့်လှစ် အလုပ်ရှင်များနှင့်စစ်မှန်သောစုဆောင်းမှု အေဂျင်စီများ။ အားလုံးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှာဖွေသူများဒူဘိုင်းအတွက်ကြိုဆိုနေကြသည်။ သင်အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ရှာတှေ့နိုငျ ပင်လယ်ကွေ့အလုပ်အိန္ဒိယလူမျိုးအဘို့အကွံဉာဏျကမ်းလှမ်း။ သူတို့က Linkedin တွင်မည်သည့် spam သို့မဟုတ်မသင့်လျော်သောပို့စ်များကိုတင်သည်။ ကြော်ငြာများ (သို့) မသင့်လျော်သောပို့စ်များကိုဖယ်ရှားပြီးအသုံးပြုသူကိုပိတ်ပင်လိမ့်မည်။ တကယ်တော့ဒါဟာအုပ်စုကောင်းတစ်ခုပါ ကျွမ်းကျင်သူများအဘို့.
ဒူဘိုင်း်ထမ်းခေါ်ယူမှု LinkedIn Group မှ 704,574 အဖွဲ့ဝင်
ဤသည်အုပ်စုအားလုံးဒူဘိုင်း်ထမ်းခေါ်ယူမှုကုမ္ပဏီများအဘို့ဖြစ်၏။ ထိုအခါအဘို့ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့အရွှေ့ဖို့ရှာဖွေနေကလူ.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်စုများအတွက် spam များကိုရှောင်ရှားခြင်းနှင့်ကြော်ငြာအဖွဲ့များကပိုမိုအသုံးဝင်နှင့်မပါစေနိုင်ရန်အတွက်။
သာစီမံခန့်ခွဲသူနှင့်အဖွဲ့ကိုမော်ဒကိုပေးပို့ဖို့အရည်အချင်းပြည့်မီဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်သောအုပ်စုတစုပိုင်ရှင်၏ခွင့်ပြုချက်အပြီးဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က may ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အဘို့သင့်ကိုပဲ့ပြင်.
ပင်လယ်ကွေ့်ထမ်းခေါ်ယူမှု LinkedIn Group မှ 1754,574 အဖွဲ့ဝင်
ဒီနည်းကို GROUP အကြောင်း
ဤသည်အုပ်စုဖြစ်ပါတယ် အားလုံးပင်လယ်ကွေ့်ထမ်းခေါ်ယူမှုကုမ္ပဏီများအဘို့။ လူတွေကလည်းပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာဖွေနေ။ ဒါ့အပြင်သင်တို့အဘို့အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေနိုင်သည် စော်ဘွားအလုပ်အကိုင်များနေရာလွတ်။ ဒီရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူဒီကနေအခြားလူများအဘယ်သို့ကြည့်ရှုပါ နေရာ မင်းအတွက်လုပ်ပေးနိုင်တယ် ထိုအပင် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အကြော်ငြာ သင်သည်သင်၏ပရိုဖိုင်ပေါ်တွင်မျှဝေနိုင်ပါသည်။ ဤအအုပ်စုများအတွက် spam များကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်။ အုပ်စုတစ်ခုကြော်ငြာလုပ်ပါကပိုမိုအသုံးဝင်နှင့်မပါစေ။ ဤနေရာတွင်ကြော်ငြာများပြုလုပ်ခြင်း။ ခွင့်ပြုမထားပေ။ နှင့်သင့်အကောင့်ပိတ်ဆို့ခြင်းဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မယ်။
အဆိုပါဝန်ထမ်းခေါ်ယူခြင်းဒူဘိုင်းကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သည် ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျော့ရှာကြံပညာရှင်များများအတွက်။ ပညာရှင်များစုဆောင်းဖို့ရှာဖွေနေသို့မဟုတ်ဌာနမှူးမုဆိုး / န်ထမ်းခေါ်ယူမှု ဒူဘိုင်းအတွက်မော်တော်ယာဉ်ရာထူးများအတွက်။ ဤသည်အုပ်စုလည်းကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက်ကွန်ယက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ အဘယ်သူသည်ဒူဘိုင်းအလုပ်ဈေးကွက်အတွက်တက်ကြွစွာအကျိုးစီးပွားထိန်းသိမ်းထားသည်။
linkedin ဂျော့ရှာရန် အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အဆက်သွယ်မှုအာနိသင်တိုးမြှင့်ကုမ္ပဏီ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရှာဖွေစုဆောင်းနှင့် HR မန်နေဂျာများနှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါ
အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီများအတွက်အတောအတွင်း။ ကနေနေ့စဉ်အာရုံ အငယ်တန်း။ အလွန်အကြီးတန်းအဆင့်အထိ စီမံခန့်ခွဲမှုရာထူး။ ယူအေအီးဥပမာအလုပ်ရှာဖွေသူများသည်။ အခုဆိုရင်နိုင် ဒူဘိုင်းရှိ Uber ယာဉ်မောင်းအဖြစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ရန်။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန် Expatri အထိ ဒူဘိုင်းမှရွေ့လျား။ မကြာခဏနေရာချခံရဖို့အလုပ်ပေါ်တယ်အပေါ်ကျော်အလုပ်လုပ်ကိုင်။ အခါအားလျော်စွာအလုပ်ရှာဖွေခြင်းသည်အချိန်ပိုင်းအလုပ်ရှာဖွေမှုများကိုပင်အချိန်ပေးသည်။ CV ရေးခြင်းပုံစံတစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ client ကိုတစ် ဦး စုဆောင်းသူချေ။ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်းတစ်ခုကိုစတင်လုပ်ကိုင်ရန်။ ရယူသည် ယူအေအီးအစိုးရအတွက်အဆင့်မြင့်အလုပ်.
၏ foreground အတွက် အလုပ်အတွက်ရှာဖွေနေ အိန္ဒိယကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်ဒူဘိုင်းစီးတီး။ အမှုဆောင်အရာရှိရှာဖွေစုဆောင်းသီးသန့်အတွင်းမှာအလုပ်လိုအပ်ချက် "ကိုပိုင်ဆိုင်" ဒူဘိုင်းမြို့။ ကြောင်းအလုပ်အခွင့်အလမ်းရဖို့တစ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဒါ။ သင်ပင်တတ်နိုင်သမျှ ဒူဘိုင်းအတွက် Adidas အတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်လူအပေါင်းတို့အားလျှောက်ထားရန်ဖြစ်ပါသည် ယူအေအီးအတွက်ပြင်ပရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီတခု။ ယူအေအီးသောကြောင့် စုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီများ ယေဘုယျအားဖြင့်တစ်ဦးစံနည်းဗျူဟာကိုအသုံးပြုပါ။ သငျသညျနေရာ အင်တာဗျူးဖြတ်သန်းနေဖြင့်တစ်ဦးအငယ်တန်းအဆင့်တွင်။ မရဒါကြောင့်မကြာခဏအဆင့်မြင့်ရာထူးများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ။ ဤအချက်များ၏ပေးထား ဒူဘိုင်းတွင်စုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီများသည်။ အဆိုပါကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုကူညီပေးခြင်း။ ၏အနှစ်သာရထဲမှာ အ အလုပ်ရှာဖွေရေး ဖြစ်စဉ်.
linkedin အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း နောက်ခံသုတေသန
သူတို့အခွအေနမြေိုး, သင်အကောင်းဆုံးများထဲမှရှာတှေ့နိုငျ ဒူဘိုင်းအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ်အကိုင်များ. အလွယ်တကူကြာချိန်အတွက်ခြောက်လတှငျတှေ့နိုငျပါသညျ။ အများဆုံးအစိတ်အပိုင်း, ပြင်ပများအတွက် linkedin ရှာဖွေရေးစုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီတွေ။ W ကဆန္ဒရှိ ho ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ်သင်တွေ့ကိုကူညီပေးပါတယ်။ အပေါ်သို့ဟုခေါ်ကြသည် လုပ်ရန် သင်တို့အဘို့အလုပ်ရှာဖွေရေး. ရေရှည်, linkedin ရှာဖွေစုဆောင်း။ ဒါ့အပြင်အမျိုးမျိုးလုပ်ဆောင် linkedin အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနောက်ခံသုတေသန။ ယူအေအီးအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကိုယ်စားလှယ်လောင်းတန်ဖိုးပေါင်းထည့်ရန်။
အဘို့အနိဂုံးချုပ် linkedin အလုပ်ရှာဖွေနေအကူအညီ။ သငျသညျလစာညှိနှိုင်းမှုနှင့်အတူကူညီပေးသည်။ သင့်ရဲ့တွင် LinkedIn တို့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစာမျက်နှာ။ စျေးကွက်သုတေသနလုံးဝများအတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်စျေးကွက်။ အဆိုပါအင်တာဗျူး set-တက်နိုင်ပါတယ် LinkedIn ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ်ထမ်းခေါ်ယူမှုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးတိုင်းကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ပင်ဥပဒေကြောင်းအရရနိုင် ယူအေအီးအတွက်အကြံဉာဏ်ကို။ သင့်ရဲ့အပေါ်နှင့်အတူ performance ကိုစစ်ဆေးနှင့်လုပ်ရကျိုးနပ်သည် linkedin ပရိုဖိုင်း။ ထိုသို့ဆိုသောကြောင့် ရွှေ့ဖို့နှင့်တွေ့ရှိရန်ထိုက်တန် တစ်ဦးအလုပ် ယူအေအီး.
ယေဘုယျခုနှစ်, linkedin ဈေးကွက်။ ဒါဟာဖန်ဆင်းထားသည် ဘို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြည်တော်ပြန်။ ဒူဘိုင်းအလုပ်အမှုဆောင်စုဆောင်းရေးကုမ္ပဏီတွေ။ သူတို့ အူပည်ူပည်န်ဆောင်မှုများအတွက်အလွန်ကြီးမားပြီးအထူးပြုများမှာ ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်နိုင်ငံခြားအလုပ်နေရာလွတ်။ အပေါ်နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက် linkedin ။ ဖြစ်ဖို့နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ် LinkedIn အားဖြင့်စုဆောင်း။ အကြီးတန်းအမှုဆောင်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းရာထူးများအတွက်။ တောင်မှအာရုံစိုက်မှုနှင့်အတူအနည်းဆုံးဖို့ Fortune မဂ္ဂဇင်း 500 LinkedIn ကုမ္ပဏီများ မဆိုပေးထားသောအချိန်က။ သို့သော်အနည်းငယ်သေးငယ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေဆီကနေကွဲပြားခြားနားသော။ အဘယ်သူသည်အပေါ်နိမ့်ဆုံးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ LinkedIn စျေးကွက်?
ထို့အပွငျ, MBA ဘွဲ့နှင့်အတူအလုပ်အမှုဆောင်ယေဘုယျအကြီးတန်းရာထူးများအတွက်။ Are 150K လစာနှင့်စံအလုပ်အကိုင်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ကျော်။ ဤသည်မှာ Linkedin ရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှာဖွေသူများအတွက်ဖြစ်ရပ်မှန်ဖြစ်သည်။ လူမှုမီဒီယာအပေါ်စုဆောင်းမှုစျေးကွက်။ နေ့တိုင်းအလွန်အမင်းမြင့်တက်နေသည်။ အထူးသဖြင့်အမေရိကန်နှင့် ကေနဒါ။ ထို့အပြင်ကာတာနှင့်ဥရောပနှင့်အတူယူအေအီးကြောင့်လည်းဖွင့်သည် ဒူဘိုင်းအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများအမျိုးသမီးတွေအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းရှေ့ဆက်ရွေ့လျား။ ကြောင်းပင်မျှော်လင့်ချက်အတွက် အနည်းငယ်ကုမ္ပဏီများသည်။ Will မည်သည့်များပြားလှသောစျေးကွက်ဝေစုရှိသည်။ သူတို့အပေါ်ကြော်ငြာလုပ်ပေးသောအခါ, linkedin.
အတူလုပ်ကိုင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်အမှုဆောင် ်ထမ်းခေါ်ယူမှု
သင်တစ်ဦးစုဆောင်းမှုရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီတခုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်အခါတိုင်း။ သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်းများကုမ္ပဏီနှင့်စုဆောင်းရေး LinkedIn ကျော်။ သင်တို့အဘို့အအလုပ်တစ်ခုရှာဖွေသူနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ LinkedIn တခုတခုအပေါ်မှာရိုးသားပွင့်လင်းချဉ်းကပ်သည်နှင့် ကျွမ်းကျင်သူများဒူဘိုင်းအတွက်အောင်မြင်မှုကိုလမ်းညွှန်။ ရေရှည်စုဆောင်းမှုအောင်မြင်မှုများအတွက်သာ။ LinkedIn ကိုအသုံးပြုပြီးသူအပြုသဘောဘက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများတွင်။ အလုပ်အဘို့, သင်တို့အဘို့ရှာဖွေမကြာခဏရှုမြင်သင့်ပါတယ်။ LinkedIn အပေါ်စုဆောင်းရေးကုမ္ပဏီများသည်။ တနည်းအားဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမိတ်ဖက်။ Will တစ်ဦးချင်းစီရှာဖွေစုဆောင်းနှင့်အတူခိုင်မာသောဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက် LinkedIn ကျော်။
စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, ဒူဘိုင်း LinkedIn တို့အေဂျင်စီအခြေခံထားပါသည်။ စုဆောင်းခြင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်များ၏ဥစ္စာဓနရှိသည်။ အသီးအသီးအကြောင်း ဒူဘိုင်းအတွက်တစ်ဦးချင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေသူ။ linkedin ငှားရမ်းမန်နေဂျာဟာ WhatsApp ကိုကျော်ဖွင့်လှစ်အလုပ်အကိုင်များရှိသည်။ ဒါကသင်ဂီယာတက်ပြောင်းရွှေ့ပေးနိုင်ပါသည်။ သူတို့ကအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေပေါ်တွင်သင်အကွံဉာဏျပေးနိုင်ပါသည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာပုံမှန်လျှောက်ထားကျော်ဘို့။ အဘယ်သူသည်အခြားအလုပ်တစ်ခု site ကိုမှလာမယ့်တာဖြစ်ပါတယ် ?. နှင့်စော်ဘွားများအတွက်ငှားရမ်းထားခြင်းကိုခံရဖို့လုံလောက်တဲ့အရည်အချင်းပြည့်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်အမှုဆောင်ရှာဖွေစုဆောင်းနှင့် Headhunters LinkedIn အပေါ်အလုပ်အကိုင်များရှာဖွေရေး
၏ရည်ရွယ်ချက် linkedin အလုပ်ရှာဖွေ. သငျသညျတခုအလုပ်အမှုဆောင်အလုပ်ရှာဖွေသူရောက်နေတယ်ဆိုရင်။ သငျသညျအခွားသူမြားအားတူအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလျှောက်ထားရန်လိုအပ်သည်။ သငျသညျအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတှေ့အကွုံကိုထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုမှအကွံဉာဏျ။ LinkedIn အပေါ်အလုပ်အမှုဆောင်အလုပ်အကိုင်များအနည်းငယ်သင်နှင့်ထမ်းရှာဖွေသူအကြားဝေးဖြစ်ကြသည်။ LinkedIn ၌ဤစိတျထဲမှာထိပ်တန်း-rated အလုပ်အမှုဆောင်ရှာဖွေစုဆောင်းနှင့်အတူ (ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အ) ။ တစ်ခုရှိသည် ပွင့်လင်းအလုပ်အကိုင်တွေအများကြီး. သို့သျောလညျး အလုပ်ရှာဖွေသူကိုယ်စားလှယ်လောင်းမမရှိခြင်း။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, သင်လုပ်နိုင်သည် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရ။ အဆိုပါ LinkedIn အလုပ်ရှာဖွေရေးရှာရန်မှတစျဆငျ့။ သငျသညျတခုတခုအပေါ်မှာအထင်အမြင်လုပ်ပုံကိုသိလိုလျှင် ရှာဖွေစုဆောင်းနှင့် headhunters.
LinkedIn ရှာဖွေစုဆောင်းနှင့် headhunters ကိုရှာဖွေ hot
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, သင်ကနဦးအဆက်အသွယ်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ LinkedIn အပေါ်နိုင်ငံတကာ HR မန်နေဂျာများ။ ဤ အဆိုပါအဘို့သန့်ရှင်းသငျသညျထားမည်ကဘာလဲ ဒူဘိုင်းအတွက်ပြည်ပမှာအလုပ်လုပ်နည်းမှန်လမ်းမှန်။ အခြားတစ်ဖက်ရှာဖွေစုဆောင်းနှင့် headhunters တွင်။ HR မန်နေဂျာများနှင့် LinkedIn အပေါ်အကြီးတန်းစုဆောင်းမှုအမှုဆောင်အရာရှိနှင့်အတူ။ အတူအလုပ်လုပ်ချင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ။ သာလြှငျ ကြောင်းမဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်အဖြစ်ကသူတို့ကိုရှုမြင်ကြသည်။ နဲ့ရိုးရိုးမဟုတ် linkedin ကြော်ငြာပွဲစားများ။
ဒီရည်ရွယ်ချက်ကနှင့်အတူ ်ထမ်းရှာဖွေသူရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်း အထူးသဖြင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီများနှင့်။ အွန်လိုင်းစသူတို့ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အချိန်ယူပါလိမ့်မယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, သင်သိလျှင် LinkedIn တို့အကျဉ်းချုပ်ရေးသားဖို့ကိုဘယ်လို မမှန်ကန်ကြောင်းနည်းလမ်းများ။ သူတို့က client ကိုကုမ္ပဏီနှင့်အတူတစ်ဦးထိန်းသိမ်းထားဆက်ဆံရေးမျိုးရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်ပင်သောမျှော်လင့်ချက်အတွက်, linkedin ်ထမ်းခေါ်ယူမှုနှင့် Headhunters သူတို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုနိုင်ပါလိမ့်မည် ဒူဘိုင်းမြို့ထဲမှာသင်ဖို့တန်ဖိုးရှိသောထိုးထွင်းသိမြင်မှု.
ဒီဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ စစ်မှန်တဲ့ဒါ့အပြင် ပိုလန်နဲ့ဥရောပရှာဖွေနေအလုပ် သင့်ရဲ့ရန်ညီတူညီမျှကအရေးကြီးတယ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတှေ့အကွုံ။ သင့်ရဲ့ပျှမ်းမျှအသက်သံသရာ၏ဘာမျှမပြောပါရန်။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်တစ်ခု အလုပ်အမှုဆောင်အနေအထား အလုပ်အကိုင်အ LinkedIn အပေါ်ရှာဖွေနေ တစ်ဦးအလွန်ရှည်လျားသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ စံထံမှကွဲပြားခြားနားသော ယူအေအီးအတွက်အကောင်းဆုံးအလုပ် Finder က်ဘ်ဆိုက်များ. linkedin အလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုကို အချိန်ကြာမြင့်စွာဖွင့်နေဖို့။ ကတည်းကတူညီသောလက္ခဏာသက်သေအားဖြင့် ရှာဖွေရေးအပါအဝင် LinkedIn အုပ်စိုးနေရာချထားကွပ်မျက်၏လုပ်ငန်းစဉ်။ နှင့်သင့်ပရိုဖိုင်းကို, အင်တာဗျူးနှင့်ညှိနှိုင်းခေါ်ဆိုခစစ်ဆေးနေခြင်းဖြင့်ရွေးချယ်ခြင်းကိုအလွယ်တကူတစ်နှစ်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှယူနိုင်ပါတယ်။
linkedin အကောင့် အလုပ်ရှာဖွေဘို့ဆက်သွယ်ရေးရည်ရွယ်ချက်
ထို့အပွငျ, သင်ရှာဖွေစုဆောင်း၏အလွန်အားကောင်းတဲ့လိုင်းရှိသည်သေချာရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်နှင့် HR မန်နေဂျာ သင့်ရဲ့အပေါ် linkedin အကောင့် ဆက်သွယ်ရေးရည်ရွယ်ချက်သည်။ ကြိုးစားပါမှ အဖြစ်အများအပြားနှင့်အတူချိတ်ဆက် ရှာဖွေစုဆောင်း သင်သည်တတ်နိုင်အဖြစ်။ နှင့်ဤနည်းလမ်းတစ်လျှောက်လုံးသင်အသေးစိတ်တုံ့ပြန်ချက်ပေးခြင်း စုဆောင်းမှုဖြစ်စဉ်ကို။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, LinkedIn အပေါ်စုဆောင်းမှုဖြစ်စဉ်ကို မျိုးစုံရှိသည်ဖို့သေချာပါစေ, မည်သည့်အဆင့်တွင်တဆင့်လဲကျနိုင်ပါတယ် အလုပ်အလားအလာ မှာတစ်ကြိမ်သွားစဉ်အမြဲပွင့်လင်းစကားလက်ဆုံစောင့်ရှောက်လော့။ သို့သျောလညျး, အခြားသူများနှင့်အတူသင်၏ဆက်သွယ်မှုများကို iterating အဆိုပါ LinkedIn တို့ဖြစ်စဉ်ကိုတလျှောက်လုံးစုဆောင်းဖို့စိတ်ဝင်စားကြောင်းနှင့်အတွေးများကိုဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
ထို့အပြင် LinkedIn အပေါ်ဒူဘိုင်း HR မန်နေဂျာများ ASAP အဆင့်မြင့်ရာထူးဖြည့်ဖို့ရှာဖွေနေ။ အမှန်တကယ်, ဒူဘိုင်းစုဆောင်းဖို့ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Send။ အမှန်တကယ် linkedin စုဆောင်းရေးစက်မှုလုပ်ငန်းဦးဆောင်အလုပ်အမှုဆောင် headhunters ။ အကောင်းဆုံးစုဆောင်းရေး၏အလင်း၌ ရှေ့ဆက်ယှဉ်ပြိုင်၏နေဖို့အလေ့အကျင့်. linkedin ရှာဖွေစုဆောင်း အများကြီးအဖြစ်ထည့်သွင်း အလုပ်ရှာဖွေသူများ သူတို့တတ်နိုင်သမျှအဖြစ်။
ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုမှဖော်ပြချက်ထည့်သွင်း linkedin အသုံးပြုသူများသည် "သစ်ကိုအခွင့်အလမ်းများဖွင့်လှစ်" အလုပ်ရှာဖွေသူများ LinkedIn အပေါ်ကိုသာရှိခြင်းအားဖြင့်ကျွမ်းကျင်ပိုင်၏မြင့်မားသောအဆင့်ကိုသရုပ်ပြရန်မလိုအပ် အံ့သြဖွယ်ပရိုဖိုင်းကို နှင့်ဧည့်သည်များမောင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကမှနောက်ဆုံးပေါ်စုဆောင်းရေးနည်းဗျူဟာကိုအသုံးပြုဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ် အိန္ဒိယအနေဖြင့်အကောင်းဆုံးကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရဖို့။ လောလောလတ်လတ်အလုပ်အမှုဆောင်ရာထူး၌သူတို့နေရာလူမှုရေးမီဒီယာကနေ။
ထည့်ပြီးစဥ်းစားပါက LinkedIn တို့ ်ထမ်းခေါ်ယူမှု Executives သင့်ရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက် သူတို့ကိုလုပ် ၏ထိပ်ပေါ်မှာနေဖို့ 2018 ၌သင်တို့အဘို့အနောက်ဆုံးပေါ်စုဆောင်းမှုခေတ်ရေစီးကြောင်း. နှင့်ရှုပ်ထွေးသောသုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုနားလည် စုဆောင်းမှုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့် အမှုတို့ကိုပြုရ။ ဤအနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သောဤစိတ်တွင်, linkedin ရှာဖွေစုဆောင်းနှင့်အတူ အဆင့်မြင့်အမှုဆောင်များ အတူတူလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဆိုပါအပြိုင်အဆိုင်အတွက် စုဆောင်းမှု ကမ္ဘာတွင်အထူးသဖြင့် LinkedIn အပေါ်အလုပ်အမှုဆောင်စုဆောင်းရေး။ အဆိုပါ LinkedIn အများစုဟာ HR မန်နေဂျာများ အရင်းအမြစ်ရှာခြင်းနှင့်စိစစ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းခေတ်မမီတော့နည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုပါ။ ရိုးရှင်းစွာအသူတို့နှင့်အတူချိတ်ဆက်ပြီးတော့ HR မန်နေဂျာများစွမ်းဆောင်ရည်စီမံခန့်ခွဲမှုကိုတိုင်းတာရန် LinkedIn အကောင့်ကိုသုံးပါ။
သငျသညျရှိပါကထောက်ပြ ဖောက်သည်တစ်ဦးဆက်ဆံရေးဟာစီမံခန့်ခွဲမှုအတှေ့အကွုံ။ သငျသညျရှာဖွေစုဆောင်းမိုဘိုင်းအပေါ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုခြေရာခံကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ နှင့်ကောင်းမွန်သောကိုသုံးပါ linkedin စျေးကွက်မဟာဗျူဟာများ။ ကုမ္ပဏီအများအပြားသည်ယခုအခါဖြစ်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည် ပူဇော်သက္ကာကို စုဆောင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအတှေ့အကွုံ LinkedIn ကျော်။ အထူးဒီဇိုင်းအကောင့် မျက်နှာပြင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုကျော်။ အခြားစုဆောင်းရေးလုပ်ငန်းတာဝန်များကိုသူတို့နှင့်အတူကူညီပေးဖို့ မိုဘိုင်းဖုန်း ဒူဘိုင်းစီးတီးအတွက်စုဆောင်းမှုနည်းပညာ.
တိကျမှန်ကန်သောမှတ်တမ်းနှင့်အတူသင့် LinkedIn အကောင့် Keeping
တစ်ဦးကအမှတ်မကြာခဏနှင့် ပတ်သက်. သတိမမူ ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ်ကဒီကပိုတစ်ခုခုကဲ့သို့မြည်စေခြင်းငှါ အဘို့အကိုက်ညီ အငယ်တန်းစာရင်းကိုင် သို့မဟုတ်အခြားအနိမ့်အတွေ့အကြုံရှိလူများ, အားလုံးကိုသင့်၏ပြည့်စုံခြင်းနှင့်အသေးစိတ်မှတ်တမ်းများကိုစောင့်ရှောက် LinkedIn အပေါ်အတွေ့အကြုံကို။ အတူဥပမာ, သင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကို ရာထူး, လျှောက်ထားသူ နှင့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ တစ်ဦးရန်အလွန်တန်ဖိုးရှိသောနိုင်ပါတယ် လူမှုမီဒီယာ အလုပ်အမှုဆောင််ထမ်းရှာဖွေသူ အဖြစ်ကောင်းစွာ။ အဘယ်အရာကိုမျှ t ကိုလူမှုရေးမီဒီယာချွတ် urns တူသော်ထမ်းရှာဖွေသူတစ်ဦးကိုယ်စားလှယ်လောင်းပရိုဖိုင်းကိုယုံကြည်စိတ်ချ၏မရှိခြင်းဦးသေဆုံး။
၎င်းတို့၏လက်ချောင်းထိပ်မှာ CV ကိုကနေအားလုံးသက်ဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွေ့အကြုံနှင့်သတင်းအချက်အလက်မရှိပါဘူးသူတစ်ထမ်းရှာဖွေသူထက်ပိုဆိုးဘာမျှရှိပါတယ်။ ဒါဟာအဘို့အလွန်အရေးကြီးပါသည် အဆင့်မြင့် headhunters အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌တည်၏။ လျှောက်ထားသူအချက်အလက်များ၏အမှန်တကယ်နှံ့နှံ့စပ်စပ်မှတ်တမ်းများကိုစောင့်ရှောက်ရန်။ သင်နှင့်အတူသင့်ရဲ့ LinkedIn ပရိုဖိုင်ပေါ်တွင်ရှိတိုင်းအဆက်အသွယ် အကြီးတန်းအမှုဆောင်အရာရှိများနှင့် HR မန်နေဂျာများ, သင့်အတွက်အသုံးပြုရန်ကြိုးစား အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖှံ့ဖွိုးတိုးတ အားထုတ်မှု။ ဒါ့အပြင်ကြည့် wy ကဒူဘိုင်းအတွက်အသုံးချခံရဖို့ထိုက်သည်ရှိသည်ဖို့သေချာပါစေ။ ထိုအပင် အဘယ်ကြောင့်ဒူဘိုင်းမြို့သည်မြေကြီးပေါ်မှာအကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်ပါသည်.
ရှာဖွေစုဆောင်းပါဝင်သော LinkedIn စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဆက်အသွယ်တစ်ဦးကကျယ်ပြန့်ကွန်ယက်ကို။ ထိုအပင် HR မန်နေဂျာများနှင့် မန်နေဂျာများငှားရမ်းတဲ့အလုပ်ရှာဖွေသူရဲ့အကောင်းဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပါသည်. အလုပ်အမှုဆောင်ရှာဖွေစုဆောင်း လူမှုမီဒီယာ်ထမ်းခေါ်ယူမှုပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ Champ ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ဒီ B2B ကွန်ယက်ကိုစုဆောင်းရန်လိုအပ်ပါတယ် !. ်ထမ်းခေါ်ယူမှုနှင့် Business ပိုင်ရှင်များနှင့်အတူလက်ရှိဆက်ဆံရေးခိုင်မာအားကောင်းစေ, ဒီအကြောင်းပြချက်သည်။ ကျိန်းသေမှသင်ကူညီ ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာတွေ့.
ပုံမှန်ဆက်သွယ်ရေးအတွင်းနှင့်အဆက်မပြတ်သင့်ရဲ့ LinkedIn တို့ Connections ကိုအတူနေ့စွဲအထိတည်းခိုသစ်ကိုများအတွက်မြျှောကူညီပေးပါမည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဆက်ဆံရေး။ အစဉ်အမြဲရှေ့တော်မှာအစိုင်အခဲစစ်ဆေးမှုများပေးခြင်းထမ်းခေါ်ယူမှုအဆိုပြုငှားရမ်းပေးသည်။ လူမှုမီဒီယာ Executives နှင့််ထမ်းခေါ်ယူမှု၏ဆက်ဆက်တစ်ခုချင်းစီ အွန်လိုင်းအသေးစိတ်ကိုစစ်ဆေးနေ။ နောက်တစ်နည်းပြောရရင် စုဆောင်းမှုအေးဂျ။ နေရာချမထားပါ ယူအေအီးအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ။ ဒါပေမယ့်လည်း ဖိလစျကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့အအားမရကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ။ အကယ်စင်စစ် HR Manager ကြိုးစားပါလိမ့်မည် သူတို့ရဲ့လူမှုမီဒီယာကွန်ယက်ကိုကြီးထွားဖို့ပိုရည်ညွှန်းရဖို့သေချာစေရန်။
အခြားသော့ချက်အချက်သင်သည် LinkedIn မှတဆင့်ရာ၌ခန့်ထားပြီဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်ရန်အရေးကြီးပါသည်ဖြစ်လိမ့်မည်နားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, လူမှုရေးမီဒီယာအဆက်အသွယ်ကနေတစျခုကွန်နက်ရှင်။ ဘို့မလုံလောကျဖွစျလိမျ့မညျ ဒူဘိုင်း၌သင်တို့၏အနေအထား။ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုနောက်တဦးတည်းအနာဂတ်မှာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်စုံလင်သောဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စိတ်ထဲ၌ဤသည်သင်၏ကြီးထွားလာမှုနှင့်အတူ ဒူဘိုင်းအတွက် linkedin Connections ကို 3rd အဆင့်ကိုရည်ညွှန်းမှတဆင့် network တစ်ခုကိုလည်းရန်အရေးကြီးပါသည် အခြားသူများနှင့်ချိတ်ဆက်။ ဥပမာအားဖြင့်, များအတွက်ကြီးထွားလာစျေးကွက်လည်းမရှိ ဒူဘိုင်းတွင်အွန်လိုင်းတောင်အာဖရိကအလုပ်အကိုင်များ။ ဒီတော့အပြုသဘောဘက်မှာ၊ မင်းဘယ်ကိုရောက်နေမှန်းဘယ်တော့မှမသိဘူး အလုပ်ရှာပါ.
သင့်ရဲ့ LinkedIn စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်လူမှုမီဒီယာခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာ
ဆိုရှယ်မီဒီယာများ၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာ၏ရည်ရွယ်ချက်ပဲစိတ်ကူးတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ join နိုင်ရန်အတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်အမှုဆောင်စုဆောင်းမှုဒါကြောင့်တိုင်းများအတွက်လိုအပ်သောလမ်းဖွင့် အလုပ်ရှာဖွေသူ။ ခပ်သိမ်းသောအမူအရာအားဖြင့်, သင်သည်သင့်လျော်သောအဓိပ္ပာယ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်မှုလုပ်ရန်ရှိသည်။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်ပေါ်တွင်သင်၏ဖြစ်လာ စံပြကိုယ်စားလှယ်လောင်း LinkedIn ကျော်အကြီးတန်းအလုပ်ခန့်အဘို့ထိုသို့ပြုရန်အခက်ခဲတာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သောကလေးစစ်သားတသိပ္ပံပညာရှင်များအဖြစ်မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုရှာဖွေခဲ့လျှင်, စင်စစ်အနည်းဆုံး 35% သိသင့် HR မန်နေဂျာများ သူတို့ကဘာသာရပ်အကြောင်းကိုအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကို၏ကကြောင်းကိုသင်တို့အပေါ်မှာငွေရှာသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည် ဒူဘိုင်းတချို့လမ်းလျှောက်-in ကိုအင်တာဗျူးသွားရောက်တန်ဖိုးရှိ.
သင်၌စိတ်ဝင်စားကြခြင်းရှိမရှိ အလုပ်လုပ်ကိုင် ဒူဘိုင်းမြို့တွင်သို့မဟုတ်ရုံအလုပ်အမှုဆောင်ရှာဖွေစုဆောင်းအတူလုပ်ကိုင်စတင်ပါ။ သို့မဟုတ်ပင် ယူအေအီးမှာထိပ်တန်းကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်လာ။ မှတံခါးသော့ကိုသင့်ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေရေးထောက်ပြ အဆိုပါနားလည်သဘောပေါက် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာစုဆောင်းမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ယုံကြည်မှုပါပဲ။ အများစုမှာဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထား စုဆောင်းမှု ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့်အတူယုံကြည်မှုတည်ဆောက်သည့်အခါဖြစ်ပါသည် အဆိုပါစုဆောင်းမှုမန်နေဂျာ နှင့်တိုင်း အလုပ်ရှာဖွေသူ မြင့်မားတဲ့ရိုသေလေးစားမှုနဲ့ကုသရပါမည်။
အံ့သြစရာ ပါကစ္စတန်ကနေအလုပ်အမှုဆောင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူ LinkedIn မှတဆင့်တစ်ဦးကိုအလုပ်ရှာဖွေတာ။ သူတို့လုပ်ဖို့လိုအပ်သမျှရိုးရှင်းစွာမိမိတို့၏ client များအတွက်အရည်အသွေးမြင့်အရင်းအမြစ်များမယ့်အရင်းအမြစ်ရှာဖြစ်လာနေသည်။ သို့သော်ယူအေအီး၌မိမိတို့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့်ဖောက်သည်နှစ်ဦးစလုံးမှပရော်ဖက်ရှင်နယ်ခေါင်းဆောင်များယုံကြည်စိတ်ချရ။ လူတိုင်းတတျနိုငျသတဲ့အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ် ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့။ သူတို့နေထိုင်နေကြနေပါစေ whey ။ အဆိုပါ LinkedIn တို့လူမှုရေးပေါ်တယ်ကြောင်းတစ်စုံလင်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
အပြုသဘောဘက်တွင်, သငျသညျစစျဆေးသငျ့ကွောငျး LinkedIn အပေါ်ကောင်းသော options များထဲကတစ်ခု။ တိကျတဲ့တည်နေရာနဲ့အလုပ်အကိုင်မှာကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သငျသညျရှာနှိပ်ပါသွားနိုင်ပါတယ် ဒူဘိုင်းဟိုတယ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့အရှာဖွေရေး။ ကတက်လှန်နှင့်ပိုပြီးရွေးချယ်စရာရှာဖွေရန်ကြိုးစားပါ။ သငျသညျကျိန်းသေကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အစိတ်ဝင်စားဖို့ options များတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတစ်ဦးကြည့်ပြီးပြည့်စုံပြီကျေးဇူးပြုပြီး ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့အလုပျအတှကျရွေ့လျားဖို့ကိုလမ်းညွှန်။ သငျသညျကျိန်းသေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးများအတွက်တန်ဖိုးကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင်သင်လုပ်နိုင်သည် ဝေစု ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါး အခြားသူတွေ LinkedIn အပေါ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိကူညီနိုင်ရန်။ ကျနော်တို့ကအမြဲအသစ်အဧည့်သည်မျှော်လင့်နေကြသည်။ အထူးသဖြင့်ဂလိုဘယ်အလုပ်ရှာဖွေသူများသည်။
ဤအချက်များပေးထားမှအခြားသူများအားကူညီ ဆက် အပေါ်ရှာဖွေစုဆောင်းနှင့်အတူ WhatsApp ကို သူကိုအခွင့်အလမ်းရှိစေခြင်းငှါ,
သငျသညျအတွက်အလုပ်ရှာဖွေရေးစတင်ရန်စေချင်ပါနဲ့ ဒူဘိုင်း? ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ထိပ်တန်း်ထမ်းခေါ်ယူမှုနှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါရန်ကဘယ်လိုသိတယ်!